China Model No: Chinese rụpụta Akpaaka Control SPJ Series metal shredder igwe factory na suppliers | Jikọọ Top
Model No: Chinese rụpụta Automatic Control SPJ Series metal shredder igwe
Igwe ihe eji eme ihe nwere ike ijikwa ụdị ngwaahịa ọ bụla, dịka ígwè, ite, ịwụ mmiri na ngwaahịa ndị ọzọ, ụlọ ọrụ anyị kwadebere maka ndị ahịa
Metal shredder igwe bụ a multi-ọtọ, vasatail igwe, ojiji nke tozuru etozu modular imewe, akụkụ interchangeability dị mma, inyeaka mma ịmụta anwụ ibe ya bụrụ nụchara anụcha si. Ebumnuche ebumnuche nke igwe shredder bụ ịkpụcha na ịgbanye nnukwu ngwongwo ígwè na nnukwu ihe eji eme ihe eji ebu ihe nke na-adighi adaba maka njem, ma kee ya n'ime ihe mpempe akwụkwọ achọrọ iji mee ka mkpokọta nchịkọta ya maka ịdị mfe njem na imegharị. Ọdịdị mara mma, ọdịdị dị mma, nkenke na kọmpat. Ọdịdị nke nnukwu igwe eji eme ihe na-eme ọ bụghị nanị na ọ ga-eme ka ikike mmepụta ihe na arụmọrụ na-eme ka ọ dị mma, kamakwa ọ na-agbasawanye ngwa nke ngwa.
A na-ejikarị igwe eji eji ígwè eme ihe maka ịkụcha ọla, mekwuo njupụta ya iji kwado njem, imegharị. A na-ejikarị igwe eji eji shredder eme ihe na ịwụcha bọket, bọket diesel, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, shea ụgbọ ala, ngọngọ ígwè, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe. Metal shredder igwe agụba ka nke elu ike alloy ígwè, na ike eyi eguzogide ma na elu ike ...
●Oké na-akpụ akpụ mma, elu ndinuak arụmọrụ, ngwaọrụ na-mere nke alloy ígwè mgbatị, ike na ogologo ọrụ ndụ.
Thickness Okpokoro efere, nwere ike iguzogide nnukwu torque, dị ike.
● Microcomputer (PLC) njikwa akpaka, melite mmalite, kwụsị, tụgharịa ma bufee ọrụ nchịkwa na-akpaghị aka.
Machine Ngwa igwe anyị nwere ụdị njirimara nke obere ọsọ, nnukwu torque, obere mkpọtụ, uzuzu nwere ike iru ụkpụrụ nchekwa gburugburu ebe obibi.
Easy ịgbanwe, ala mmezi na-eri, akụ na ụba na inogide.
● A pụrụ ịgbanwe ọkpụrụkpụ nke ngwá ọrụ na ọnụ ọgụgụ mma mbọ dị ka ihe dị iche iche
Principlekpụrụ ọrụ nke ígwè shredder igwe:
Ihe site na sistemụ nri n'ime igwe shredding n'ime igbe ahụ, igbe igwe na-ebu ihe eji akpụ afụ ọnụ, ihe mgbe shredding agụba, extrusion, ịkwa osisi na ihe ndị ọzọ zuru ezu, gbanye n'ime obere iberibe ihe iji nweta ihe achọrọ, site na ala akụkụ nke igbe. Mgbapụta nke igwe eji eji igwe eme ihe ọ bụghị naanị na-edozi nnukwu mpaghara nke ihe eji akwakọba ihe site na igwe eji akpachapụ ihe igwe dịkwa mfe ibugharị na imegharị ihe. N'ime usoro ahụ dum, nke kachasị mkpa bụ onye na-egbutu ihe na moto, igwe na-ekpochapu ihe iji dọwaa ihe ndị e ji ígwè mee, isi ike isi, ihe ndị na-eguzogide na-adịkarị elu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ndị a chọrọ ga-eduga na mmebi nke igwe.
Igwe anyị na-eji ígwè shredder nwere njikwa na-akpaghị aka, ọ ga-adaba adaba maka ịrụ ọrụ, mmezi dị mfe.
1.Metal Shredder igwe agụba
Anyị nwere ike ịmegharị igwe ihe eji eme ihe maka gị gbasara akụrụngwa nke igwe a.
3. Igwe igwe niile
Obere igwe anyị niile nwere igwe nwere ihe pụrụ iche, ọ na-ekpuchi obere mpaghara, o nwere atụmatụ nchekwa na mma.
.Dị Agụba n'obosara (mm) Nha ụlọ (mm) ikike (n'arọ / h) Ike (kw) Igwe nha (mm) Ibu (n'arọ)
Anyị SPJ Series metal shredder igwe na-enye omenala ama ika igwe akụkụ, anyị na e na-ekwenyere ọtụtụ ụwa a ma ama ika soplaya, dị ka SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI na na maka ihe karịrị 10 afọ
Anyị ga-eji ngwugwu ihe nkiri fụchie ma ọ bụ nkwakọ osisi iji kpuchido igwe SPJ Series metal, anyị ga-eme nchedo dị mma maka igwe SPJ Series metal tupu anyị ebunye igbe.
Ekiri ihe mkpofu metal shredder Machine na Action!
Nke gara aga: Model No: CBJ Series haịdrọlik scrap bale emebi igwe
Osote: Model No: Chinese rụpụta Manual Control Q43 Series Hydraulic Scrap Metal Alligator Shear Machine
metal shredder igwe
Metal Powder Briquette Machine, Ọla kọpa Scrap Baler, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine, Mpempe akwụkwọ Metal Baler, Agụba Shear Maka Mobile Digger,